Free Google Akwụ Ike-di n'izoputa anyi Thermostat na nwụnye | Gosi Top
Free Google Akwụ Ike-di n'izoputa anyi Thermostat na nwụnye
Akwụ thermostat bụ smart thermostat, nke na-amụta àgwà gị na mgbe adjusts na kpo oku ndutịm n'ụlọ gị ona gị omume. Nke a pụrụ iduga ego na gị ike ụgwọ. Ọ na-azọrọ na o nwere ike belata gị ego ruo 20%.
Akwụ thermostat efu £ 249 na nwụnye, otú ọ bụghị ọnụ ala.
Ị nwere ike nweta Akwụ thermostat na nwụnye n'ihi na free. Ọ bụrụ na ị na-ebi UK na-agbanwe gị ike tarifu ka a duel mmanụ, kpọmkwem debit, Nwere ọgụgụ isi Control - October 2016. Na a tarifu na-abịa na a free akwu ike na-azọpụta thermostat na nwụnye, gị ike price ga-ofu ruo mgbe October 2016. Ị ga-enwe ike ịgbanwe soplaya ruo mgbe ụbọchị a ma e nwere ego na-apụ n'isi.
Kasị ike tariffs bụ nanị maka a obere oge, ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị mgbe ọ kasị mma edebanye dị ka n'oge na-adịghị dị ka o kwere ka nke a na-enye nwere ike akwụsịwokwa anya.
Iji nweta ihe a na-enye nnọọ gara na njikọ n'okpuru na debanyere.
Free Akwụ Thermostat
Freebies Enweghị asịsa Bish Jaishi
← 1. Udomo 70-461 – Querying Microsoft SQL Server 2012 : Microsoft akwụkwọ na Business ọgụgụ isi Free £ 10 Uber Local tagzi / Tagzi Service gam akporo / iPhone / IOS / Windows App koodu mgbasa ozi →